Fantaro i Alhassan Mohammed Awal, mpikatroka ho an’ny fiteny Dagbani · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2022 7:07 GMT
Saripika natolotr'i Alhassan Mohammed Awal ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra ireo fiteny afrikàna aty anaty habaka nomerika, tianay ny hanasongadina an'i Alhassan Mohammed Awal (@Alhassa51457950) avy ao Ghana.
Ny ankamaroan'ny asan'i Alhassan no mifantoka amin'ny asa maha-mpiara-manorina ny Vondrona Wikimediàna Mpampiasa Dagbani natao hanampiana amin'ny fananganana fahalalàna malalaka amin'ny fitenindreniny.
Tsy ela akory izay ny Rising Voices no nitafa tamin'i Daniel tamin'ny alàlan'ny imailaka mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny vinany mahakasika ny fomba hahitan'ny fiteniny toerana ety anaty habaky ny aterineto.
Alhassan Mohammed Awal (AMA): Izaho no Alhassan Mohammed Awal. Mpiara-manorina ny Dagbani Wikimedians User Group (Vondrona Wikimediàna Mpampiasa Dagbani)
Izaho no Talen'ny Fifandraisana, ny Fanentanana sy Fanapariahana ao amin'ny Vondron'ireo Mpampiasa. Mpikatroka ihany koa aho ho an'ny zon'ny ankizy sy ny zon'ny zazavavy hahazo fampianarana. Tafiditra ao anatin'ny fikatrohana nomerika ataoko ny fampiroboroboana ny fampiasàna ireo fitaovana isankarazany ao amin'ny Wikimedia toy ny Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wiktionary ary ireo fitaovana nomerika tohana isankarazany ho an'ny fiteny ka azo raisina ho entina manamora ny asa fikatrohako ho an'ny fiteny ety anaty aterineto.
Tiako hiparitaka erantany ny fiteny Dagbani ka hameno ireo rehetra habaka nomerika misy. Vinavinako ny hanao izay hahafantaran'ireo milina fikarohana rehetra ety anaty aterineto an'ilay fiteny. Ivelan'ny vondrompiarahamonina Wikimedia, mpampianatra aho, miasa ao amin'ny Sampandraharaham-Pampianarana ao Ghana (GES). Efa asa nataoko ny mpampianatra anaty efitrano, Tale, mpiandraikitra toeram-panadinana ho an'ny Fitantanana ny Fampianarana tao amin'ny Distrikan'i Nanton any amin'ny faritra avaratr'i Ghana, ary taty aoriana kely dia nafindra ho lasa mpandrindra ny fanabeazana fototra, ary amin'izao fotoana izao aho dia Talen'ny Fanohanana ny Fanatsaràna ny Sekoly (SISO). Fanampin'izay, mahaliana ahy ny fanoratana sy ny fanaovana asa an-tsitrapo.
Pikantsarin'ny Dagbani Wikipedia.
RV: Manao ahoana no toerana misy ilay fiteninareo ety anaty aterineto sy ivelany?
AMA: Iray amin'ireo fiteny zara raha misy mpahalàla ety anaty aterineto ny Dagbani. Tsy toy ireo fiteny hafa izay azo ikarohana torohay amin'ny alàlan'ny Google, ohatra, fa ny mifanohitra amin'izay no marina ho an'ny Dagbani.
Tsy misy akory aza gazetiboky ao an-toerana vita amin'ny fiteny Dagbani, izay farafaharatsiny mba hahafahan'ireo mpianatra mamaky momba izay olana mitranga manodidina azy ireo amin'ny fiteny Dagbani, tsy lazaina intsony ireo gazety an-tsoratra ao amin'ny firenena. Tsy misy na kely aza habaka nomena ho an'ny fiteny Dagbani any anatin'ny ankamaroan'ireo Foiben'ny fahitalavitra sy onjampeo ao Ghana.
Raha momba ny ivelan'ny aterineto indray, misy vitsivitsy ireo fitaovana/boky any amin'ny sasantsasany amin'ireo sekoly sy ireo toerana famakiamboky natao ho an'ny daholobe, saingy tsy mora ny mahazo azy ireny na tsy maimaimpoana. Iray monja ny anjerimanontolo ianarana ny fiteny Dagbani ho toy ny taranja iray, ary dia vitsivitsy ihany aza ireo mpianatra liana amin'ny fianarana ilay fiteny. Maro ireo teraka Dagbani no liana amin'ny fianarana ny anglisy sy ireo taranja hafa any amin'ireo anjerimanontolo ary manao anjorom-bàla ny fitenin'izy ireo manokana.
AMA: Ny Dagbani dia iray amin'ireo vondrona ara-poko miisa 16 mampiasa ny fiteny Mole-Dagbani (izay mifampiankina sy maka ny fàkany avy amina razambe iraisana) tenenina ao amin'ny faritra avaratr'i Ghana. Ireo mpampiasa io fiteny io fotsiny (amin'ireo fiteny 16 mifampiankina) dia tombanana ho mihoatra ny 3 tapitrisa. Io no iray amin'ireo fiteny lehibe indrindra ao Ghana. Amin'ny maha-mpikatroka mavitrika ho an'ny fiteny ahy, tiako hiely erantany ny Dagbani ary hanenika ireo habaka nomerika rehetra misy. Vinavinako ny hanao izay hahafantaran'ireo milina fikarohana rehetra ety anaty aterineto ny fiteny Dagbani.
Antenaiko ireo mpiteny Dagbani mba hanomboka hamaky sy hanoratra votoaty amin'ny fiteny Dagbani amin'ny fomba mora eny anatin'ireo habaka nomerika, ary mba hanao izay hahafahana mahita, mahazo ireo votoaty amin'ny fiteny Dagbani, ary azo ampiasaina maimaimpoana eny anaty sehatra nomerika. Manantena koa aho mba hahavita zavatra mitovy amin'izany ho an'ireo foko 16 Mole-Dagbani rehetra.
AMA: Fanamby iray atrehana ny fanindrahindràna tafahoatra ny fiteny anglisy. Ny fitsaratsaràna fahatany atao amin'ireo mpampianatra ny fiteny Dagbani hoe ireo izay tsy alehany tamin'ny anglisy ihany no mandeha mianatra / mampianatra ny fiteny Dagbani. Vokany, raha misy olona lasa Karimba (mpampianatra Dagbani), na ny mpianatrao aza tsy mandray anao ho matotra satria tsy irian-dry zareo ny ho lasa tahàka anao. Dia ahoana izany ry zareo no “handany ny fotoanany” hamorona votoaty amin'ny fiteny Dagbani ety anaty aterineto?
Matetika ireo izay mahadingana ny sakana ka mianatra ilay fiteny any amin'ny Anjerimanontolo no miafara amin'ny tsy fandraisan'ny Sampandraharahan'ny Fampianarana ao Ghana azy ireo hiasa hampianatra, indrindra fa any amin'ny fanabeazana fototra izay azo hanairana ny fanirian'ireo ankizy dieny mbola kely ho liana amin'ny famoronana votoaty amin'ny fitenindrenin-dry zareo ety anaty tambajotra.
Sady koa, tsy afaka ampiasaina amin'ireo fitaovana teknôlôjika marobe ilay fiteny, toy ny fitendry iOS mampiasa endri-tsoratra latina ho entina mitendry ny Dagbani.
Iray hafa ny tsy fisian'ny traikefa fahaizana mamorona votoaty anaty aterineto
AMA: Ilaina ireo Mpikatroka Nomerika ho an'ny Fiteny, toa ahy, mba hamorona sehatra sy hanapariaka ireo fandaharanasa misy fahaizamamorona hanomezana ny tanora ireo fahaizana ilaina mba hamoronany votoaty amin'ny fitenindreniny.
Ireo hetsika toy ny nataon'ny tarika misy anay, izany hoe ny famoronana ireo lexemes Dagbani mihoatra ny 500 ao amin'ny Wikidata, ny fanapariahana ny Dagbani Wikipedia Saha, fandaharana iray alefa fahitalavitra natomboka mba hampianarana ny olona, indrindra fa ny tanora any amin'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena, ny fomba hamoahana ao amin'ny Wikipedia amin'ny fiteny Dagbani, ny fandikàna ireo fitaovana ety anaty tambajotra ho amin'ny fiteny Dagbani, ny fandraketana feo ireo voanteny Dagbani maherin'ny 4.000 sy fampiakarana azy ireny ao amin'ny Wikimedia Commons, ary mbola ao ny maro hafa dia fomba mahafinaritra sy mahasarika hisarihana ny tanora hamorona votoaty amin'ny fitenindrenin-dry zareo.
Ireo governemant dia tokony hanohana ny fanakaramàna sy fanolorana olona hianatra ny fiteny Dagbani any amin'ireo sekolinay mba hanome torohevitra mifanaraka tsara ho an'ireo mpianatra ho entina mampivoatra ny fahalianany hampiasa ny fiteniny manokana.